ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ မီတာခများ တိုးမြှင့်ခြင်း အာဏာရှင်စနစ်၏ အငွေ့အသက် မကုန်သေးသည့် လုပ်ရပ်ဟု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန် (ရုပ်သံ)
အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ မီတာခများ တိုးမြှင့်ခြင်း အာဏာရှင်စနစ်၏ အငွေ့အသက် မကုန်သေးသည့် လုပ်ရပ်ဟု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန် (ရုပ်သံ)
ပြည်သူများအတွက်ယခုကဲ.သို. ပြောပေး ၊ ဆိုပေးခြင်းအား
နောင်ကိုလည်း အာဏာရှင်အငွေ.အသက် ပါလုပ်ရပ်များ
အား ဝေဖန်ပြောကြားပေးပါရန် ။
. . . ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည် ။
That shows "The Bad, The Worse and the Ugly",of so called Reforms to Democracy country,BURMA.